को भनाइ जान्छ रूपमा, "sbiraetsya अव्यावहारिक Khazars भविष्यसूचक ओलेग बदला लिन।" तिनीहरूले Slavs को विकास को स्तर तल थिए कि? हामी मान्छे के थाहा छ?
सँगै, हामीलाई यी प्रश्नहरूको जवाफ प्राप्त गरौं।
बेपत्ता व्यक्तिहरूको रहस्य
Kievan रस को अवधि गर्न साहित्यिक सन्दर्भ धन्यवाद, हामी राजकुमार Svyatoslav को Khazar Khanate को मुख्य शहर नाश भनेर थाह छ।
Sarkel, Samandar र ITIL नष्ट र राज्य को स्थिति फितलो बनाइदिएको थियो। तिनीहरूलाई बारेमा 12 औं शताब्दीमा पछि केहि भन्न छैन। नवीनतम उपलब्ध जानकारी तिनीहरूले कब्जा र Mongols कब्जा थिए भन्ने संकेत गर्छ।
7 सदियों देखि - - समय पहिला अरबी, फारसी, मसीही स्रोतहरू मा भने Khazars को। यसको राजाहरूलाई उत्तर काकेशस र वोल्गा मुख नजिकै कैस्पियन steppes को क्षेत्र मा एक विशाल प्रभाव छ। धेरै छिमेकी को Khazars गर्न आदर भुक्तानी।
अब सम्म, यो मान्छे रहस्य मा shrouded छ, र धेरै जानकारी converge छैन। अनुसन्धानकर्ताहरूले शायद प्रत्यक्षसाक्षी खाता राष्ट्रिय विशेष मार्फत आफ्नो बाटो बनाउन।
यो अरब दूरी र समय, तुर्क बीचमा केही उपाय - पूर्ण अलग हो, यहाँ अझै Byzantine यहूदी, स्लाव भाषाहरु र Khazar अवधारणा थप्नुहोस्। हिब्रू वा टर्की भाषामा - शहर को नाम अक्सर इस्लामी तरिका मा नै अनुच्छेद मा, अन्य छन्। त्यो शहर थप वा कम, पूर्ण तुलनामा ethnonyms अझै सफल छैन थियो कि एकदम सम्भव छ। साथै ठूलो बस्तियों को रहलपहल पत्ता लगाउन रूपमा।
एक पूर्ण भ्रम र अर्थहीन मा प्राप्त पत्र, द्वारा न्याय। विशाल, 500 किलोमिटर र सानो प्रान्त - शहर को राजा को वर्णन मा। सायद, फेरि, यो यायावर उपाय दूरी एक सुविधा छ। Khazars Petchenegs, Polovtsi दिन बाटो रूपमा छलफल र हिमालहरू र सादा मा सडक लम्बाई भेद।
साँच्चै यो थियो सबै कस्तो छ? का बिस्तारै बुझ्न गरौं।
मूल बारेमा Hypotheses
को Khazars - Dagestan को विशाल फाँटमा मा7शताब्दीको बीचमा, पूर्वी काकेशस मा, वहाँ एक hitherto अज्ञात तर धेरै शक्तिशाली मानिसहरू छ। यसलाई कसले हो?
तिनीहरू "Kasari" कल। "KAZ" "खानाबदोशी" को प्रक्रिया मतलब शब्द, सबै भन्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसार, तुर्की मूल बाट लिइएको हो। तिनीहरूले आफूलाई बस nomads कल गर्न सक्छन्, छ।
ल्याटिन (सम्राट्लाई) र तुर्की ( "दासत्वमा") भाषा - अन्य सिद्धान्त फारसी ( "हजार" "Khazars") सम्बन्धित। वास्तवमा, केही लागि ज्ञात छैन, त्यसैले हामी खुला सूचीमा प्रश्न थप्नुहोस्।
मान्छे को मूल गुप्ति एक पर्दा अन्तर्गत पनि छ। आज, बहुमत यसलाई अझै पनि तुर्की ठान्नुहुन्छ। के जाति पुर्खाहरूको हुन दावी?
पहिलो सिद्धान्त अनुसार - कुलको Akatsirs को राजकुमार, को Huns को एक पटक ठूलो साम्राज्य को एक भाग।
दोस्रो विकल्प तिनीहरूले Khorasan देखि settlers मानिन्छ छ।
यी hypotheses सानो प्रमाण छ।
तर निम्न दुई पर्याप्त बलियो छ र केही तथ्य पुष्टि। मात्र प्रश्न के स्रोतहरू थप सही हो, छ।
यसरी, तेस्रो सिद्धान्त को Uighurs को Khazars सन्तानहरू बुझाउँछ। आफ्नो इतिहास मा चिनियाँ रूपमा उल्लेख "मान्छे-गर्न SA।" को Hun साम्राज्यको पतन दौरान, दुर्घटना को कमजोर फाइदा लिइरहेको, को Oguz को एक भाग पश्चिम गए। आत्म-नाम समूह त्यसैले "10 कुल", "30 कुल", "सेतो कुलको" को रूपमा अनुवाद गर्दै छन्, र।
तिनीहरूलाई Khazars कुनै पनि थिए? कसले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? यो राष्ट्र तिनीहरूमध्ये थियो विश्वास छ।
resettlement को प्रक्रिया मा, तिनीहरू उत्तरी कैस्पियन र KUBAN मा पाउँछौं। पछि, वृद्धि प्रभाव संग, Crimea मा र वोल्गा मुख नजिकै बसे।
को Crimean प्रायद्वीप मात्र "Husar" को रूपमा जानिन्छ थियो मध्ययुगीन स्रोतहरू धेरै लामो छ। साथै, कीव मा पनि देश देखि mercenaries एक detachment थियो। बारेमा यस्तो तथ्य को संरक्षित toponym मार्फत देख्न सकिन्छ "Kozar पर्चा।"
थप प्रभाव र subordinated नयाँ कुल प्राप्त बसोबास को प्रक्रिया मा मूल एक यायावर मान्छे। स्थापित वर्गीकरणका टर्की साम्राज्यको मा अपनाए।
"एबेदमेलेकको", अरब - - "malik" वा "खलीफा" राज्य को टाउको मा यहूदी उल्लेख मा "Hagan" थियो। पृथ्वीमा परमेश्वरको कठपुतली थियो र धार्मिक र सांसारिक कार्य एकसाथ ल्याउँछ। वास्तवमा, शीर्षक शासन गर्न तर शासन छैन दिइएको। ब्रिटिश रानी को वर्तमान अवस्था समान केही।
को Khazars को सिंहासन गर्न चढाई एउटा रोचक परम्परा थियो। नयाँ कुल उच्च परिषद संग कोठा मा Hagan मृत्यु रेशम कर्ड गर्न डकगरिएको। अर्को, म त्यो शासन गर्न जाँदै छ कसरी पुरानो सोध्नुहोस्। समाप्ति मा, खैर, त्यो मृत्यु भएको थियो।
को आवेदक धूर्त र एक ठूलो संख्या भनिन्छ भने, यो राजा चालीस वर्ष कार्यान्वयन पछि उसलाई अझै पनि व्यवहार गर्नुभयो छ।
"पृथ्वी" शक्ति Bey नजिकै। हाम्रो समझ मा - यो सरकार को कार्यकारी शाखा छ। आफ्नो सम्पत्तिको मा सेना थियो, अधिकारीहरु भने। वास्तवमा, उहाँले Khanate शासन गरे।
माथिल्लो वर्गले Khazar अभिजात वर्ग थियो - Tarhan, एक निशान तल दासत्वमा मानिसहरूले थाह थियो - Elteber।
प्रान्त गवर्नर्स द्वारा शासन - कर संग्रह, जिम्मेवारी पूरा गर्न जिम्मेवार छ र आफ्नो क्षेत्रमा अर्डर संरक्षण जो Tudun।
विशिष्ट पूर्वी मध्ययुगीन राज्य, सबै परम्परा र जीवन को बाटो संग। मात्र फरक बसे यो यायावर जीवन को चरण पारित गरेको छ भन्ने छ।
अर्थव्यवस्था को आधार आफ्नो पुर्खाहरूको प्राचीन परम्परा अनुसार, गाई थियो। तर यसलाई दाखबारी को प्रजनन र मादक पेय को उत्पादन, अनाज र को खेती थपियो Melons।
शहर को आगमन संग शिल्प विकास गरिएको छ। ज्वैलर्स, blacksmiths, potters, tanners र अन्य मालिकको आन्तरिक व्यापार आधार गठन।
थाहा र सत्तारूढ कुलीन र सेना कब्जा छिमेकी देखि plunder र आदर बन्द बस्थे।
साथै, आय को एक महत्वपूर्ण वस्तु इलाका Khanate त्यस भत्ता माल मा शुल्क र कर थिए। को Khazars को इतिहास inextricably "पूर्व-पश्चिम" को Crossroads जोडिएको छ भन्ने तथ्यलाई को दृश्य मा, तिनीहरू केवल अवसर फाइदा लिन सकेन।
को Khanate हात चीन देखि युरोप बाटो थियो, वोल्गा मा राज्य नियन्त्रण नेभिगेसन अन्तर्गत र कैस्पियन सागर को उत्तरी भाग मा रहेको छ। Orthodoxy र इस्लाम - Derbent दुई warring धर्म अलग एक पर्खाल भयो। जो मध्यस्थ व्यापार को एक अभूतपूर्व संभावना दिनुभयो।
यो व्यवहार एक "परजीवी" देशहरूमा, जबकि अरूलाई बाँच्न र स्थिति को वास्तविकताहरु मा लहलह मात्र सम्भव र तार्किक तरिका मा जिद्दी केही कल।
साथै, Khazars दास व्यापार मा सबै भन्दा ठूलो ट्रान्जिट बिन्दु भयो। northerners पूर्ण भएको Persians र अरब गरेर किनेको द्वारा Captivated। यस बालिका - दुवै अन्त: पुर concubines र सेवकहरू अनि मानिसहरू लागि - योद्धाहरू रूप मा, खेत र अन्य भारी श्रम मा कामदारहरूलाई।
पनि 10-11 शताब्दीयौंदेखि मा राज्य यसको आफ्नै सिक्का minted। यो अरब पैसा को एक अनुकरण भए तापनि, तर उल्लेखनीय कुरा अभिलेखमा "मुहम्मद - अगमवक्ता" छ Khazar सिक्का गर्न, नाम "मोशाले" उभिए।
संस्कृति र धर्म
मानिसहरूले मुख्य जानकारी, अनुसन्धानकर्ताहरूले मूल लिखित स्रोतहरू हुन्। जस्तै Khazars, Pechenegs, Cumans रूपमा यायावर जनजाति देखि, कुरा थप जटिल छन्। कुनै पनि कागजात को एक आदेश सेट अवस्थित छैन।
एक disparate धार्मिक inscriptions वा घरेलू प्रकृति ठूलो अर्थमा छैन। तिनीहरूलाई को जानकारी को मात्र डली प्राप्त।
हामी पट मा लेखिएको कुलका को संस्कृतिको बारेमा कति थाह "यूसुफ गरे"? यहाँ हामी साधारण बर्तन र यस्तो विभिन्न जातिहरूका स्वामित्वको नाम रूपमा केही भाषाई परम्परा मात्र के थियो बुझ्न हुनेछ। हुनत यो सम्पूर्ण साँचो छैन। यो पोत बस किन्न सक्छ र एउटै बाइजान्टियम र Khorezm देखि ल्याउन, भन्नु,।
वास्तवमा, मात्र एउटा कुरा ज्ञात छ। "बेवकूफ Khazars" धेरै जातिहरू र कुल, स्लाव भाषाहरु, अरबी, टर्की र यहूदी बोलियों कुरा गर्ने पनि समावेश छ। राज्य कुलीन कुरा र हिब्रू मा दस्तावेज राखिएको र साधारण मानिसहरूलाई आफ्नो तुर्की जरा बारेमा परिकल्पना गर्न जान्छ जो रुनिक लेखन, प्रयोग।
आधुनिक विद्वान अवस्थित को Khazar भाषामा घनिष्ठ चुभास छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
राज्य मा धर्म पनि फरक थिए। तर, सूर्यास्त Khanate को युग गर्न, यहूदी थप र थप प्रचलित र मूख्य भयो। को Khazars को इतिहास मौलिक सम्बन्धित। को 10-11 शताब्दीयौंदेखि मा "शान्तिपूर्ण coexistence faiths" अन्त भएको छ।
यो पनि ठूलो शहर को यहूदी र मुसलमान छिमेक बीच अनियमितताहरु थाले। तर यस मामला मा गर्जनका, अगमवक्ता मुहम्मद को अनुयायीहरूलाई।
समाज तल्लो बाँध्न मा मामिलामा स्थितिको बारेमा, हामी कारण कुनै पनि स्रोतबाट को कमी, तर उल्लेख गर्न केही छोटकरीमा गर्न कठिनाई संग न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। तर पछि यो।
देश मा स्थिति मा आश्चर्यजनक स्रोतहरु, यसको इतिहास र उपकरण एक स्पेनिश यहूदी धन्यवाद हामीलाई आए। Cordoba courtier Hasdai इब्न Shafrut नाम, kaganate बारेमा बताउन, को Khazars राजा एउटा पत्र लेखे।
आफ्नो आश्चर्य कारण एक कार्य जस्तै। उहाँले एक यहूदी हो, र अत्यधिक शिक्षित, उहाँले आफ्नो countrymen को व्याकुलता थाह थियो। त्यसपछि पूर्व व्यापारीहरू देखि आगंतुकों यहूदी प्रभुत्व थियो जो एक, केंद्रीकृत शक्तिशाली र उच्च विकसित देशहरूको अस्तित्व, को बताउनुहोस्।
ती जिम्मेवारीहरू Hasdai र कूटनीति थियो भएकोले, त्यो नियम निम्न र सत्यवादी जानकारीको लागि Kagan गर्न पारिएको छ।
जवाफ उहाँले अझै पनि यो पायो। र म (बरु dictated) यो व्यक्तिगत "Meleh Iosif हारून को छोरा" Hagan Khazar साम्राज्य लेखे।
पत्र मा उहाँले रोचक जानकारी को धेरै बताउँछ। सन्देश आफ्नो पुर्खाहरूको को Umayyads संग कूटनीतिक सम्बन्ध थियो भनेर भन्छन्। यसबाहेक, उहाँले इतिहास र सरकारको बाटो बारेमा बताउँछ।
उहाँलाई अनुसार, Khazars को पुर्खा एक बाइबलीय Japhet, नूहको छोरा छ। राजा पनि एउटा राज्य धर्म रूपमा यहूदी को बनाउने लिजेन्ड बताउँछ। उनको अनुसार, यो पहिले Khazars भनौदाहरूले थियो paganism, विस्थापन गर्न निर्णय भएको थियो। कसले यो सबै भन्दा राम्रो तरिका गरेका सक्छ? को पाठ्यक्रम पूजाहारीहरूले। क्रिश्चियन, मुसलमान र यहूदी आमन्त्रित थिए। पछिल्लो सबैभन्दा स्पस्ट बोल्नु् थियो र अरूसित तर्क।
दोस्रो संस्करण (एक पत्र) अनुसार, पूजाहारीहरूले लागि परीक्षण जो टोरा थिए "खुसी दुर्घटना" हो अज्ञात चर्मपत्र गूढ रहस्य मा शामिल थिए।
अर्को Kagan मान्छे को देश को भूगोल र यसको प्रमुख शहर र जीवनको बारेमा बताउँछ। तिनीहरूले शिविर जमीन मा वसन्त र गर्मी खर्च र वर्ष को चिसो समय मा बन्दोबस्त फर्के।
उत्तरी आदिवासीहरूले को आक्रमण बाट मुस्लिम बचाउँछ जो मुख्य deterrent, जस्तै Khazar Khanate को स्थिति बारे पत्र सेखी भन्नु समाप्त हुन्छ। रस र Khazars, को मृत्यु नेतृत्व जो, 10 औं शताब्दीमा नहुनु मा कडा छ को कैस्पियन अमेरिका।
सारा राष्ट्र जहाँ गरे?
र अझै, तिनीहरूले यस्तो Sviatoslav, ओलेग Veschy रूपमा रूसी शासक मूल मा सम्पूर्ण राष्ट्र नष्ट गर्न सकिएन। को Khazars रहन र आक्रमणकारिहरुमा वा छिमेकी assimilate थिए।
साथै, mercenaries को Khanate सेना छैन धेरै सानो, सरकार सबै कब्जा क्षेत्रहरूमा शान्ति राख्न र Slavs संग अरब को सामना गर्नु छ किनभने थियो।
मिति, सबै भन्दा plausible संस्करण निम्न बुझेका छन्। आफ्नो लोप साम्राज्य धेरै परिस्थितिमा को संयोग owes।
पहिलो, कैस्पियन सागर स्तर को वृद्धि। देश को आधा भन्दा बढी भएको तालाब को तल थियो। चराई र दाखबारी, घरहरू र अन्य कुराहरू बस अवस्थित भएनन्।
त्यसैले, प्राकृतिक प्रकोप द्वारा थिचिएको, मान्छे उम्कन र जहाँ छिमेकी को विरोधको सामना गर्नुपर्ने उत्तर र पश्चिम, सार्न थाले। को Kievan अगुवाहरू मौका मा यहाँ र त्यहाँ "अव्यावहारिक Khazars मा बदला लिन।" सो अवसरमा एक लामो समय को लागि थियो - दासत्वमा मान्छे ले, शुल्क पनि वोल्गा व्यापार मार्ग।
एक नियन्त्रण शट रूपमा सेवा जो तेस्रो कारण, यो जितेको कुल मा भ्रम थियो। तिनीहरूले शोषणकारीहरूलाई को प्रावधान को कमजोरी महसुस र गरे। बिस्तारै प्रान्त, अर्को पछि एक गुमाए।
यी सबै कारक योगफल, जो राजधानी सहित तीन प्रमुख शहर, नाश रस को अभियान, फलस्वरूप लमतन्न परेर पसारिएका राज्य परे। राजकुमार Svyatoslav भनिन्छ। को Khazars उत्तरी योग्य विरोधीहरूले को onslaught काउन्टरको गर्न असमर्थ थिए। Mercenaries सधैं अन्त गर्न लड्न छैन। यसको जीवन र अधिक महंगा छ।
बचेका को जो सन्तानहरू सबैभन्दा plausible संस्करण, निम्नानुसार छ। Assimilation दौरान, Khazars को Kalmyks एकिकृत, र आज यो राष्ट्र को भाग हो।
मा साहित्य सन्दर्भहरू
को Khazars काम बारे संरक्षित जानकारी सानो संख्याको दृश्यमा धेरै समूह विभाजित छन्।
पहिलो - यो ऐतिहासिक वा धार्मिक विवाद छ।
दोस्रो - हराएको देशहरूमा लागि कल्पना खोज को ट्युन गर्न।
तेस्रो - छद्म उत्पादन।
मुख्य अभिनेता - Hagan (अक्सर छुट्टै वर्ण रूपमा), राजा वा Bek Iosif, Shafrut, Svyatoslav र ओलेग।
मुख्य विषय - यहूदी को स्वीकृति र Slavs र Khazars जस्ता राष्ट्रका बीच सम्बन्ध पौराणिक कथा।
को अरब संग युद्ध
कुल इतिहासकारहरूले 7-8 शताब्दीयौंदेखि मा सशस्त्र द्वन्द्व दुई पहिचान। पहिलो युद्ध, दस वर्ष लामो दोस्रो - बीस-पाँच भन्दा बढी।
टकराव ऐतिहासिक विकास को पाठ्यक्रम प्रत्येक अन्य प्रतिस्थापित जो Kaganate तीन खलीफा थियो।
642 मा, पहिलो संघर्ष अरब द्वारा ट्रिगर थियो। तिनीहरूले Khazar Khanate इलाका मा काकेशस आक्रमण। यो अवधिमा जहाजहरु मा धेरै तस्बिरहरू बाँकी भएकोले। तिनीहरूलाई धन्यवाद, हामी Khazars के थिए बुझ्न सक्छौं। रूप, हतियार, हतियार।
haphazard मुठभेड़ों र स्थानीय संघर्ष को दस वर्ष पछि, मुस्लिम जो समयमा Belenjer मा एक क्रशिंग पराजित भयो, एक विशाल आक्रमण मा निर्णय गरे।
दोस्रो युद्ध लामो र तयार थियो। यो आठौं शताब्दीको प्रारम्भिक दशकहरूमा थाले, र 737 वर्ष सम्म लामो थियो। सैन्य संघर्ष समयमा Khazar सेना Mosul को पर्खालहरु पुग्यो। तर अरब सेना प्रतिक्रिया Samandar कब्जा र Kagan शर्त।
समान संघर्ष गर्ने 9th शताब्दीमा सम्म जारी राखे। कि पछि, शान्ति मसीही राज्य को स्थिति बलियो को दृश्य मा गरिएको थियो। सीमा को Khazar थियो जो Derbent को पर्खाल, मार्फत भाग्यो। सबै दक्षिण गर्न अरब गर्न belonged।
रस र Khazars
कीव राजकुमार Svyatoslav Khazars पराजित गरेका थिए। कसले यसलाई अस्वीकार गर्न जाँदै छ? तर, वास्तवमा मात्र अन्तिम सम्बन्ध झल्काउँछ। यो विजय preceded कि शताब्दीपछि एक जोडी को लागि के थियो?
तिनीहरूले भविष्यसूचक ओलेग कब्जा थिए सम्म रेकर्ड मा Slavs, को Khazar Khanate गर्न अधीनस्थ थिए जो व्यक्तिगत कुल (radzimichy, vyatichi, आदि), उल्लेख।
उहाँले तिनीहरूलाई एकमात्र अवस्था पनि Khazars, तिनीहरूले अब तिर्न छैन भनेर गर्न सजिलो आदर ओभरले भन्छन्। घटनाहरूको यस्तो पालो पक्कै संवाददाता प्रतिक्रिया साम्राज्य कारण। तर युद्ध कुनै पनि स्रोत उल्लेख छैन। हामी मात्र शान्ति निष्कर्षमा र Ruses Khazars र Pechenegs संयुक्त अभियान गए थियो भन्ने तथ्यलाई गरेर बारेमा अन्दाज लगाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ एक रोचक र चुनौतीपूर्ण भाग्य थियो यो राष्ट्र हो।
Sealand (रियासत) को भर्चुअल राज्य - उत्तर समुद्र मा एक अपतटीय मंच मा microstate
अब्रामले हन्निबल - अफ्रिकी हजुरबुबा रूसी कवि
पोल्टावा को युद्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सारांशित
आर्मेनियाली उद्योग: मुख्य निर्देशन
आन्तरिक लिङ्किङ साइटहरू र आधारमा स्तर सन्दर्भ। स्तर एल्गोरिदम सन्दर्भ। सन्दर्भ स्तर रद्द
सर्वश्रेष्ठ कोरियाली dorama: सूची विवरण र्याङ्किङ्ग। प्रेम बारेमा सबैभन्दा कोरियाली नाटक
के हुन्छ यदि बच्चा निमोनिया छ?
ऊर्जा बचत दीपक को प्रकार। अपार्टमेंट लागि ऊर्जा बचत दीपक छनौट। समीक्षा
Estee Lauder डबल पहनें: ग्राहक समीक्षा
Urografin: प्रयोग, analogs, समीक्षा, contraindications लागि निर्देशन। Urografin 76%: प्रयोगको लागि निर्देशन
भ्कगडा। परिवार र सहयोगिहरु कसरी मिलाप गर्न?